Lalao Android 3 izay nandresy noho ny fahatsorany | Androidsis
Lalao Android 3 izay nandresy noho ny fahatsorany
Cristina Torres sary placeholder | | Fampiharana Android, Lalao Android
Angamba manana tsotra zavatra toa antsika amin'ny ankamaroan'ny tranga misy zavatra tsy vita. Saingy tsikelikely, amin'ny lafiny maro, ny zavatra tsotra dia voaporofo fa ny ankamaroany no mitondra mankany amin'ny fahombiazana. Ary ny tontolon'ny Android dia tsy azo ankanavaka amin'izany fitsipika izany. Raha ny tena izy, misy lalao maro napetraka ho fampiasa indrindra, izay manintona ny mpanaraka erak'izao tontolo izao ary nanova ny mpamorona azy ho mpitrapitrisa saika mandritra ny alina, ary ny ankamaroany dia miavaka amin'ny fanombohana amin'ny fomba tena tsotra. Ka mba tsy hisy ho very ny iray amin'ireo vaovao ato amin'ity Android ity, ary koa ho an'ireo izay te-hametraka lalao indray izay efa tena navoakan'ny olona tokoa, ity ny lisitray anio miaraka amin'ny Lalao Android 3 izay nandresy noho ny fahatsorany.
Ny marina dia raha jerenao akaiky dia mitovy daholo izy rehetra rehefa dinihintsika izy ireo dia afaka milaza fa toy ny a doka dokam-barotra tsara. Tsy misy mahalala hoe avy aiza no niavian'io hevitra tsotra sy mazava io, fa izao tonga tamin'ny mpamorona ary fahombiazana io, mino isika rehetra fa mety ho tonga amintsika io. Ary izany dia tsotra kokoa, tsy mety. Te hijery ve ianao?
1 Lalao Android 3 izay nandresy noho ny fahatsorany
1.1 Tapao ny tady
1.2 Candy crush saga
1.3 voankazo Ninja
Iray amin'ireo angamba kilalao kilasika ho an'ny Android, fa koa multiplatform finday izay iankinan'ny lalao maro hafa ankehitriny ankehitriny. Izany no fahombiazan'ny fahombiazana, amin'ny farany, mandika anao izy ireo amin'ny farany. Voarohirohy amin'ny anarany no tokony hatao amin'ny lalao; manapaka tadiny. Fahamarinana tsotra? Miomàna tsara, satria eo ambanin'io hevitra io dia manana fahasarotana be dia be isika rehefa mandalo ny ambaratonga ary tsy maintsy tadidinao daholo ny fahalalana matematika sy ny aritmetika izay nianaranao indray andro tamin'ny fahazazanao mba handrosoana. Farafaharatsiny, azo antoka fa izy io koa dia mety hampahatsiahy anao ny mpampianatra na iray amin'ireo andraikitra sahirana nataonao ireo.
Tapaho ny tady Classic
Tapao ny tady manolotra kinova maimaim-poana ary mifanaraka amin'ny kinova Android samihafa arakaraka ny fitaovana.
Misy kely azo ampiana momba ny a mpivarotra tsara indrindra amin'ny lalao Android. Na ny tena marina, fampidinana super raha misy ilay kinova maimaimpoana. Nanomboka tamin'ny fanomezana be dia be horesahina ao amin'ny Facebook izany. Nanohy niteraka ady ara-tsosialy mihoatra ny iray ary olana hafa sasany avy amin'ireo reny izay nikarakara kokoa ireo vatomamy ireo fa tsy ny zanany. Izy io dia heverin'ny manam-pahaizana amerikanina maro ho iray amin'ireo manandevo indrindra indrindra amin'izao fotoana izao. Fa tonga hatrany ny fahombiazana. Mazava fa tsy ny olon-drehetra no afaka mankafy azy, ary tokony hiezaka handany fotoana kely ianao ary tsy hihidy eo anelanelan'ny vatomamy misy loko.
Candy crush saga Maimaimpoana ny misintona ary mifanaraka amin'ny Android 2.2 sy ambony kokoa
Na dia androany aza ianao dia mety nanandrana ity lalao ity ho an'ny Android amin'ny sehatra tsy misy ifandraisany amin'ny tontolon'ny finday, ny marina dia ity anaram-boninahitra ity no iray amin'ireo mifandray indrindra aminy. Ho an'ireo izay tsy mahalala dia nanjary fenitra tamin'ny terminal rehefa nanomboka nalaza ny Android tamin'ny taona 2010. Hatramin'izay dia nitombo tanjona tokana izy io. Tsy maintsy manapaka tsara ireo voankazo ianao ary manao izany fa tsy very eny an-dalana. ¿Mora ny fanamby? Eny ary, tohizo ary hiainanao izany.
Developer: Studios Halfbrick
voankazo Ninja Izy io dia mifanaraka amin'ny Android 2.3.3 ary azo sintomina maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Lalao Android 3 izay nandresy noho ny fahatsorany
Kinova vaovao an'ny SoundCloud misy fiovana kely hita maso, tenifototra amin'ny karoka sy maro hafa
Sintomy ny Chrome Beta 35 ho an'ny Android miaraka amin'ny fanatsarana maro